မိုးကောင်းကင်: October 2009
ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စသည်တို့မှာ ပညာဆည်းပူးနေကြတဲ့
မြန်မာများကို နိုင်ငံခြားသားတွေက မေးတယ်။
“ သင်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားက သင်တို့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်သလား ” တဲ့။
“ ဟာ… ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေနဲ့ ကောင်းမှုသုစရိုက်တွေကို
ညွှန်ပြပေးတယ်၊ မကောင်းမှုလုပ်ရင် မကောင်းမှုကံဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းမှုလုပ်ရင်
ကောင်းမှုကံဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ကောင်းကံ၊ မကောင်းကံတွေက ကိုယ်နဲ့အတူ အမြဲလိုက်ပါပြီး
အကျိုးပေးတက်တယ်။ ကောင်းကံတွေက ကောင်းကျိုးပေးပြီး မကောင်းကံတွေက
မကောင်းကျိုးတွေကို ပေးတယ်၊ သတ္တ၀ါတွေဟာ ကိုယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကံတွေ
စီရင်တဲ့အတိုင်း သံသရာမှာ ကျင်လည်နေကြရတယ်။ ”
“အို…. ဒါဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားက သင်တို့ကို မကယ်တင်နိုင်ဘူးပေါ့။
သင်တို့ဟာ သနားစရာပဲ၊ တို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး
ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေကိုသူတို့ ကျူးလွန်ထားတဲ့ အပြစ်တွေ ရှိလျှင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပြီး
အင်း… ဒီလိုဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သနားစရာဖြစ်နေကြပြီပေါ့။ ဘုရားသခင်ကပဲ
ကယ်တင်နိုင်သလား၊ ကိုယ့်ကံကပဲ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးသလားဆိုတာ
အင်္ဂလန် စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ဝေါလ်တာ (John Walters) က
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ သတင်းလိုက်ယူရင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ The Essence of
Buddhism (ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ အနှစ်သာရ ) အမည်ရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးတယ်။
အဲဒီစာအုပ်မှာ သူတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်သွားတော့ မဟာမိတ်လေယာဉ်များက
ဆီအောမြို့တော်ကို အကြီးအကျယ် ဗုံးကြဲနေတယ်။ သာသနာပြု မစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့
မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဆရာမကဦးဆောင်ပြီး ကလေးများအားလုံး “ ဘုရားသခင်
ကယ်တော်မူပါ ” သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုနေကြတယ်။ ဗုံးတစ်လုံးက
အဲဒီတော့ “ ဘုရားကယ်တင်တယ် ” ဆိုတာ အခြေအမြစ်မရှိဘူး။
င် မကယ်တင်နိုင်ရင် သေတဲ့အခါ
ဗုဒ္ဓဘာသာအရ ကောင်းကင်မှာ နတ်ပြည် ၆ ထပ်နဲ့ ဗြဟ္မာဘုံ ၂၀ တောင်ရှိတယ်။
သူတို့ပြောတဲ့ “ ကောင်းကင်ဘုံ ” ဆိုတာ ဘယ်ဘုံလဲ။ အခြားသီးသန့်တစ်ဘုံများ
ဖြစ်နိုင်သလား။ ရုပ်၊ နာမ်ရှိတဲ့ဘုံလား၊ ရုပ်၊ နာမ်မရှိတဲ့ဘုံလား။ ရုပ်၊
နာမ်ရှိတဲ့ဘုံဆိုရင် ထာဝရ မတည်မြဲနိုင်ဘူး။ ရုပ်၊ နာမ်တရားတွေက
ဗုဒ္ဓဘာသာက သိထားတဲ့ဘုံတွေဆိုတာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တစ်ဆူတည်း မြင်သိတာမဟုတ်ဘူး။
အရှင်သာရိပုတ္တာရာ၊ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန်စတဲ့ အဘိညာဉ်ကိုရတဲ့ သာဝကများလည်း
မြင်သိကြတာ၊ အရှင်မြတ်တွေကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ကြသေးတာ။
ပြီးတော့ ကံ၊ ကံရဲ့အကျိုးရှိတာကို မြတ်စွာဘုရားသာမက ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်၊
ယထာကမ္မူပဂ အဘိညာဉ်ရကြတဲ့ လူများလည်း သိမြင်ကြတာ။ ကံအကျိုးပေးရှိလို့ အတိတ်ဘ၀၊
နောက်ဘ၀ဆိုတာရှိတယ်။ သံသရာဆိုတာရှိတယ်။ ကယ်တင်ရှင်ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှင့်
ပတ်သတ်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ဖြေဆိုခဲ့ဖူးတယ်။
အခါတပါးမှာ မြတ်စွာဘုရားဟာ နာဠန္ဒမြို့ပါဝါရီက သူဌေးရဲ့ သရက်ဥယျာဉ်မှာ
သီတင်းသုံးနေတော်မူတယ်။ အဲဒီအခါ အဘိဗန္ဓကရဲ့သား ရွာသူကြီးက
“အရှင်ဘုရား… ပစ္ဆာဘူမိမှာနေတဲ့ ပုဏ္ဏားတွေဟာ လူသေရင် နတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်
လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရှင်ဘုရားကော လူသေရင် နတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်
ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားက “ ရွာသူကြီး…. သင့်ကိုပဲ ပြန်မေးပါရစေ၊
သင်ကြိုက်သလိုဖြေပါ၊ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုကို ရေတွင်းထဲ
ပစ်ချလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဟေ့… ကျောက်တုံးပေါ်ပါလော့၊ ဟေ့… ကျောက်တုံး
ကုန်းပေါ်သိုတက်ခဲ့ပါလော့ လို့ လူအများက၀ိုင်းပြီးတောင်းပန်တယ် ။ လက်အုပ်ချီပြီး
အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းတယ်။ ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အတွက် ကျောက်တုံးက ရေထဲပေါ်လာမည်လား၊
ကုန်းပေါ်ကို တက်လာမည်လား ”
“ မပေါ်လာနိုင်ပါ၊ မတက်လာနိုင်ပါဘုရား ”
“ ရွာသူကြီး… လူတစ်ယောက်ဟာ ထောပတ်အိုးတစ်လုံးကို ရေကန်ထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ပြီး
ရိုက်ခွဲလိုက်တယ် ဆိုပါတော့၊ အဲဒီအခါ အိုးချမ်းကွဲတွေက အောက်ကိုကျပြီး
ထောပတ်တွေက ရေပေါ်ကို တက်လာကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီအခါ လူတွေစုဝေးပြီး “ ဒီထောပတ်တွေ
ရေအောက်ကို ကျသွားပါစေ၊ နစ်မြုပ်သွားပါစေ ” လို့ လက်အုပ်ချီပြီး အကြိမ်ကြိမ်
ဆုတောင်းကြတယ်၊ ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အတွက် ထောပတ်တွေက ရေအောက်ကို
“ မနစ်မြုပ်နိုင်ပါဘုရား ”
“ရွာသူကြီး… ဒီဥပမာလိုပဲ၊ လူတစ်ယောက်က ကုသိုလ်တွေကို မပြုဘဲ ဒုစရိုက်တွေကိုသာ
ကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင် ဒီလူသေတဲ့အခါ နတ်ပြည်ရောက်ပါစေလို့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ
၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းတောင်း ဒီလူငရဲကျမှာပဲ၊ အခြားလူတစ်ယောက်ကတော့ ဒါန၊ သီလ၊
ဘာဝနာ ကောင်းမှုတွေကိုပဲ အများကြီးလုပ်ထားရင် ဒီလူသေတဲ့အခါ ဒီလူငရဲ ကျပါစေလို့
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းတောင်း ဒီလူနတ်ပြည်ရောက်မှာပဲ ”
“ ကဲ.. မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ ဥပမာက သဘာဝမကျဘူးလား။ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလား။
မကောင်းမှု လုပ်ထားတဲ့ လူကနတ်ပြည်ရောက်ပြီး ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့လူက
ဘုရားသခင်ကို ရှိမခိုးတဲ့အတွက် ငရဲကျရင် ဒီဘုရားသခင်ဟာ တရားမျှတပါဦးမလား ”
စိတ္တေန နိယတေ လောကော။
စိတ်ကလောကကို ဦးဆောင်နေတာတဲ့။ စိတ်က လောကကို ဖန်တီးနေတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်က
ကုသိုလ်ကံမျိုးစေ့ကို ဖြစ်စေပြီး ကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်၊ အကုသိုလ်စိတ်က
အကုသိုလ်ကံမျိုးစေ့ကို ဖြစ်စေပြီး မကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်။
မြတ်စွာဘုရားက ဒီလို ကံသဘော - ကမ္မနိယာမ ရှိတာကို ရှင်းပြပြီး ကုသိုလ်တရား၊
အကုသိုလ်တရားတွေကို ခွဲခြားပြထားပေးတယ်။ လူတိုင်း၊ လူတိုင်း
ကောင်းတာလုပ်ဖို့နဲ့ မကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံကို ကိုယ်အမွေခံရမယ်။ ကံရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကို ဘယ်ဘုရားသခင်မှ
ဒီလို ကံသဘောတွေကို အမှန်အတိုင်းညွှန်ပြပြီးတော့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ
လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလည်း ညွှန်ပြကာ တကယ်ထာဝရချမ်းသာရာ
နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်သို့ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားသည်သာ တကယ့်ကယ်တင်ရှင်
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:03 PM 1 comments Links to this post
ယနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တွေဟာ ဘာသာအသိတရား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေါင်းပါးလာပြီ။
ဘုရားတောင်မှ ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ဦးချရကောင်းမှန်း မသိကြတော့ပါဘူး။ ဒီလို
အခြေအနေ တွေကိုသိလို့ မြတ်စွာဘုရားက "နောင်အနာဂတ်ကာလမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ငါးမျိုး
ကွဲပြား လိမ့်မယ်" ဟု ဟောတော်မူထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာ ငါးမျိုးကတော့......
(၁)။ ကုလ ဗုဒ္ဓဘာသာ
(၂)။ လာဘ ဗုဒ္ဓဘာသာ
(၃)။ ဘယ ဗုဒ္ဓဘာသာ
(၄)။ သဒ္ဓါဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာ
(၅)။ ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာ
(၁)။ ကုလ ဗုဒ္ဓဘာသာ( မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ)
ကုလ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ ရိုးရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုပြောတာပါ။ အမေအဖေက ဗုဒ္ဓဘာသာမို့
သားသမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လာရတာပါ။ မိဘက ခရစ်ယာန်ဆုိုရင် သားသမီးကလည်း ခရစ်ယာန်။
မိဘက အစ္စလာမ်ဆိုရင် သားသမီးကလည်း အစ္စလာမ်။ ဒါကို မိရိုးဖလာ ကုလဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့။
မိဘက ဗုဒ္ဓဘာသာ မို့သာ သားသမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လာရတယ် ဘုရားရှင် ဘာလို့
ပွင့်မှန်းမသိ။ ဘုရား ဘာတရားဟောမှန်းလည်း မသိ။ ကိုယ်ပြောတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာတောင်မှ ဘာပြောမှန်းမသိ။ ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ မြတ်စွာဘုရား
ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရမှန်းလည်းမသိ။ တရားတော်ကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရ မှန်းမသိ။
ဘုရားကို ဦးချတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဦးချနေမှန်းကို မသိတာ။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်
ရိုရိုသေသေနဲ့ အလေးပြုနေမှန်းကို မသိတာ။ လုပ်တော့ လုပ်နေတာပဲ အသိပညာ ဘာမှမပါတာ။
လာဘာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ လာဘ်လာဘလိုလို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီဘ၀
စီးပွားရေးလေး တက်မလားဆိုပြီးတော့မှ ဘုရားကိုးကွယ်တာမှာ ရွေးပြီးတော့
ကိုးကွယ်တယ်။ ဒီဘုရားကိုးကွယ်ရင်တော့ လာဘ်လာဘ ပေါများတယ်
ဟိုဘုရားကိုးကွယ်ရင်တော့ စီးပွားတတ်တယ်ဆိုပြီး ရွေးကိုးကွယ်တာ လာဘဗုဒ္ဓ ဘာသာပါ။
ဘုရားကိုးကွယ်မှ လာဘ်ပေါမယ်ဆိုရင် ဘုရားမကိုးကွယ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ ဘာလို့
လာဘ်ရွှင်နေတာလဲ။ အဓိက စီးပွားရေး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဘုရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။
အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုလုပ်မယ်။ အိမ်ခြံဝင်းဝယ်မယ်။ ရောင်းမယ်။ အိမ်နေရာ
ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ရက်ရာဇာ ပြဿဒါး ရွေးနေတာတွေ၊ ဘုရားကျောင်းဆောင် ပေါ်မှာ
ဘိုးတော်ပုံတွေ ဘွားတော်ပုံတွေ တင်ထားတာတွေ၊ ကိုးကြီးကျော် မနှဲလေး အစရှိတွေ
နတ်တွေ ကိုးကွယ်တာတွေ၊ ဗေဒင်တွေ ယုံကြည်ပြီး ယတြာတွေ ချေလိုက်ကြ စတဲ့ လာဘ်လာဘ
လိုချင်လို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို လာဘာဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုခေါ်ပါသည်။
(၃)ဘယ ဗုဒ္ဓဘာသာ(ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
ဘယဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘေးကို ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ အန္တရယ်ကင်းဖို့ ၊
ဘေးရှင်းဖို့၊ အသက်ရှည်ဖို့၊ ကျန်းမာဖို့ ၊ ဒီလိုအတွေးအခေါ် အယူအဆတွေနဲ့
ဘုရားကို ကိုးကွယ်တာကို ဘယဗုဒ္ဓဘာသာဟုခေါ်ပါသည်။ ဒီဘုရားကို ကိုးကွယ်မှ
အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင် ဒီဘုရားကို မကိုးကွယ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အစလာမ်တွေ အသက်ရှစ်ဆယ်
တစ်ရာကျော်တွေ ရှည်နေကြတာ ဘာလို့ပါလဲ။
ဘာမှမသိဘဲ ရမ်းကိုးကွယ်တာ ကုလဗုဒ္ဓဘာသာ၊လာဘ်လာဘာ လိုချင်ပြီး ကိုးကွယ်တာ လာဘ်လာဘ
လိုချင်ပြီး ကနားတွေပေးတာ လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဘေးကြောက်ပြီး အကိုးကွယ်တွေ မှားနေတာ
ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ။ ဒီကုလ၊လာဘ၊ ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ သုံးမျိုးကို အောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဟု
ဟိုလူမပါ၊ ဒီလူမပါ၊ ဟိုလူပသပါတယ်။ ဒီလူပသပါတယ်။ လက်ညှိုးထိုး ခွက်လှန်
လုပ်နေတာတွေကို မြတ်စွာဘုရားက သူတောင်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာပါတဲ့။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသိ၊ဘာသာရေးအသိဓာတ်ခံ အားနည်းတော့ လိမ်စားနေတဲ့ သူတွေက
လိမ်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဘုရားလည်း ကိုးကွယ်ရသေး၊ တရားလည်း ကိုးကွယ်ရသေး၊
ဆွမ်းဦးကိုလည်း လောင်လှူရသေး သာသနာတော်ကိုလည်း သင်္ကန်း ဆွမ်းကျောင်းဆေး ၊
ပစည်းလေးပါးနဲ့ လှူဒါန်းပူဇော်ဆက်ကပ်ရသေး။ ဘာအတွက် ဒါတွေ လုပ်နေရတာလဲ ဘာအတွက်
သာသနာကို ချီးမြှောက်နေတာလဲ၊ ဘာအတွက် ကျောင်းဆောက်နေတာလဲ ။ စဉ်းစားပါ၊ ဝေဖန်ပါ၊
သဒ္ဓါဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သဒ္ဓါတရားကို အရင်းခံပါတယ်။ သဒ္ဓါတရားဆိုတာ ယုံကြည်ချက်ပါ။
ဘုရား၊တရား၊ သံဃာာကို တကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို
ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ယုံကြည်တဲ့ သမ္မာသဒ္ဓါ နဲ့
မှားမှားယွင်းယွင်း ယုံကြည်တဲ့ မိစ္ဆာသဒ္ဓါဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
သမ္မာသဒ္ဓါဆိုတဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်ချက် ဆိုတာ သစ္စာာတရား သိတော်မူတဲ့
မြတ်စွာဘုရားဟာ ဝေနေယျ သတ္တ၀ါတွေကို သူသိသကဲ့သို့ မေတ္တာ ဂရုဏာတော်အပြည့်နဲ့
သစ္စာာလေးချက် အနက်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒီတရားတော် အနက်တွေကို
နိဗ္ဗာန်ဝင်စံသွားကြပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အိုနာသေ လွတ်ရာပါ။ "အသေလွတ်ရာ ပြတတ်လို့
မြတ်စွာဘုရားအား ကိုးကွယ်ပါ၏" ဆိုတဲ့ ယုံကြ ည်ချက်ဟာ မှန်သောယုံကြည်ချက်။
တရားတော်ကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရသလဲ။ မြတ်စွာဘုရားဟော်တော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်ကို
ကြိုးစားမယုတ် ပွားများအားထုတ်လိုက်လို့ တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်း
မဂ္ဂင်လမ်းအတိုင်းသာ လျှောက်သွားရင် နှိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမည်။ ထိုအသေလွတ်ရာ
ပို့ဆောင်တာဟာ တရားက ပို့ဆောင်တာပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်က ပို့ဆောင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ထိုတရားတွေ မကွယ်မပျောက်သေးတာ ဘယ်သူ့ကျေးဇူးပါလဲ ဆိုရင် သံဃာာရဲ့  ကျေးဇူးပါ။
ဘုရားရှင် ဟောတော်မူသော ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ သုတ်ဝိနည်း
အဘိဓမ္မာတရားတွေ ဒီတရားတွေကို သံဃာာတော်တွေက ဆောင်ထားတာပါ။ ပိဋကသုံးပုံကို
သံဃာတော်တွေက စောင့်ရှောက်ထားတာပါ။ သံဃာာတော်ကို ယုံကြည်မှု။
ဒါတွေက ရတနာမြတ်သုံးပါးကို မှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့ သမ္မာသဒ္ဓါ ယုံကြည်မှု။
မိစ္ဆာသဒ္ဓါယုံကြည်မှုက လာဘ်လာဘပေါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းတယ် ဆိုပြီး
ကိုးကွယ်ယုံကြည်နေတာဟာ မိစ္ဆာသဒ္ဓါ။ လာဘ်လာဘပေါတယ်ဆိုတဲ့ လာဘဗုဒ္ဓ
ဘာသာယုံကြည်ချက်၊ အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီး ဘယဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့  ယုံကြည်မှု
ဗုဒ္ဓရဲ့  ဂုဏ်တော်ကို ဘာမှနားမလည်ဘဲ သူများဦးတိုက်လို့သာ ရမ်းဦးတိုက်ရတဲ့
ကုလဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့  ယုံကြည်မှု ဒါတွေက မိစ္ဆာသဒ္ဓါတွေပါ။
အသေလွတ်ရာလမ်းကို ပြတတ်လို့၊ အသေလွတ်ရာကို ပို့ဆောင်နိုင်လို့ ၊ အသေလွတ်ရာ
တရားကို ဆောင်ထားနိုင်လို့ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ပါ၏ ဆိုတဲ့ သမ္မာသဒ္ဓါ ။
အနှစ်သာရမရှိတာကို မရှိဘူးလို့ သိတယ်။ အနှစ်သာရ ရှိတာကို ရှိတယ်လို့ သိတယ်။
မှားတာကို မှားတယ်လိုိ့သိတယ်။ မှန်တာကို မှန်တယ်လို့ သိတယ်။ သိတဲ့အပြင်၊
အမှားလမ်းကို ရှောင်၊ အမှန်လမ်းကို ဆောင်တာသည့် သမ္မာသဒ္ဓါ ရှိတဲ့ သဒ္ဓါဓိက
ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သစ္စာတရားကို သေချာသိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခေါ်တာပါ။ သဒ္ဓါဓိက
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တရားတော်ကို ယုံကြည်တယ်။ တရားတော်ကို ဘယ်လိုယုံတာလည်း ဆိုတော့
ရမ်းယုံတာမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာသိနဲ့ အသေအချာ သိပြီး ယုံတယ်။ ထိုသို့ သိတာကို ပညာဟု
ခေါ်ပါတယ်။ သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို အသေအချာ ပညာသိနဲ့ သိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊
ဖြစ်မှုပျက်မှုတွေကို သိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပျက်မြင်တာ ခန္ဓာက မြင်တာလား
ပညာကမြင်တာလားဆိုတော့ ပညာက မြင်တာပါ။ ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ဘုရားက
မင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာ ဖြစ်တာနဲ့ ပျက်တာပဲ ရှိတယ် လို့ ဟောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို
ကိုယ်တိုင် သစ္စာတရားတော်ကို သေချာသိပြီး ကျင့်ကြည့်လိုက်တော့ မြင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်မြင်တော့ ယုံကြည်လာတယ်။ ယုံကြည်တာက သဒ္ဓါ၊ ဖြစ်ပျက်မြင်တာက ပညာ။
ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါနဲ့ ပညာ သွားပြီး တွဲနေပါတယ်။ သဒ္ဓါနဲ့ ပညာဟာ တွဲလျက်ပါတဲ့။
သဒ္ဓါတရား မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ သာ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အပါယ်လေးပါးမှ
တို့မှာ အပါယ်မျိုးစေ့တွေ၊ အပါယ်ကျကြောင်းကံတွေ လုပ်ထားတာရှိတယ်။ ဒါတွေကို
ဘယ်သူမှ ၀င်တားလို့ မရပါဘူး။ သူ့ကိုတားချင်ရင်၊ သူ့ကို အကျိုးမပေးစေချင်ရင်
ဘာနဲ့ ဖြတ်ရမလဲ ဆိုတော့ ဥာဏ်နဲ့ ဖြတ်ရပါမယ်။ ဥာဏ်နဲ့ ဖြတ်လိုက်လို့
ဖြစ်ပျက်မဂ်ဆိုက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သဒ္ဓါလည်း ပါတယ်၊ ပညာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါသည်
သဒ္ဓါဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဓါဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အထက်တန်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။
(ဒီဗုဒ္ဓဘာသာငါးမျိုး အကြောင်းကို အရှင်ဇောတိသာရ(စဉ့်ကူး) ရေးသားပူဇော်သည့်
မိုးကုတ်မြို့  ကုန်းမြင့်သာယာရပ် ဓမရံသီရိပ်သာ ပဓာန နာယက ကမဋ္ဌာနစရိယ
နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ ဟောကြားတော် မူအပ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာငါးမျိုး
နှင့် သစာလေးပါး တရားတော် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်ကို
သိလိုပါက ထိုစာအုပ်တွင်ထပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း။ အားလုံးပဲ
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:44 PM0comments Links to this post
၁ ။ လုပ်တိုင်း မဖြစ် စိတ် မညစ်နှင့်
ကိုယ်လုပ်တိုင်း သာဖြစ်နေပါက ဘယ်မှာ အနတ္တ ရှိမည်နည်း ။
၂ ။ ဆင်းရဲ ကြုံမှု မညည်း ညူနှင့်
်ချမ်းသာ ချမ်းသာ ကြုံနေပါက ဘယ်မှာ ဒုက္ခ ရှိမည်နည်း ။
၃ ။ အာရုံဟူသမျှ မတောင့်တ နှင့်
အာရုံတိုင်းသာ တောင့်တ ပါက ဘယ်မှာ လောဘ ဆုံးမည်နည်း ။
၄ ။ ပြောတိုင်း မရ ဒေါမထ နှင့်
ပြောဆိုတိုင်းသာ ရနေပါက ဘယ်မှာ အနတ္တ ရှိမည်နည်း ။
၅ ။ သိဉာဏ် မလိုက် သင် မမိုက် နှင့်
သိဉာဏ် မရ မိုက်နေပါက ဘယ်မှာ မောဟ ဆုံးမည်နည်း ။
၆ ။ ပျက်စီးတိုင်း လျှင် မပူပင် နှင့်
မပျက်စီးကာ ခိုင်မြဲ ပါက ဘယ်မှာ အနိစ္စ ရှိမည်နည်း ။
၇ ။ ဗုဒ္ဒတရား မေ့ မထား နှင့်
ဆုံးမတိုင်းသာ ကျင့်ကြံပါက ဘယ်မှာ နိဗ္ဗာန် ဝေးမည်နည်း ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:39 PM0comments Links to this post
တစ်ယောက် အပေါ် တစ်ယောက်အလိုမကျ အားမရသဖြင့် စိတ်ကောက် ဆန္ဒပြခြင်းသည်
တစ်ဖက်သား၏ စိတ်ဝယ်ရေနွေး အဖျောခံနေရသော ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်ထက် အထိနာ၏။
ရန်သူ၏လက်သည်းအခွံခွာ ညှဉ်းဆဲသည် ထက်လည်း အထိနာ၏။
နေပူကြီး၏အတွင်း တိမ်ပုပ်ဆင်းစဉ် ကာလ ထက်လည်း အခံရဆိုး၏။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုဖြင့် ဆို့ပိတ်ခံရ သည်ထက်လည်းဆိုး၏။
စင်စစ် တို စိတ်ကောက်ခြင်းသည်မိမိ မကျေနပ်သော စကားလုံးကို တစ်ဖက်သား
ထုချေခွင့် အလျဉ်းမပေးပဲ တစ်ဖက်သတ်ပြောကြားနေခြင်းပင်။
အကြင်သူသည် မိမိသို့သော်၎င်း၊ မိမိပိုင် ပစ္စည်းကို သော်၎င်း၊
အာရုံညွတ်၊ စိတ်ကလည်း ဆွတ်ချူရန် အကွက်ချောင်း လျက်ကရှိ၏။
ထိုသူ့အားပျူငှာလောကွတ် အဖြစ်ဖြင့်ပင် မဆက်ဆံသင့်။
အားနာခြင်း ရှေ့သွားဖြင့် လည်း မကမ်းလင့်သင့်။
မိုးသည်နွေ ၊ မိုး ၊ ဆောင်းသုံးရာသီပြောင်းတွင် မိုးတွင်းမှသာ ရွာ၏။ သွန်း၏ ။
ကျန်ရာသီများ ၀ယ်မရွာမသွန်း၊လူတို့တွင် လည်းပထမ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယတည်း
ဟူသော အရွယ်သုံးပါးတို့တွင် တစ်ရွယ်သာလျှင် အကျိုးပေးသန်လာတတ်ချေသည်။
ထိုအကျိုးပေးတို့သန်ချိန်မစုမိ၊ မဆောင်းမိ၊ မပေါင်းမိ၊ မစည်းမိပါသော်ကား
တောင်ပေါ်နေသမား မိုးရွာချိန်ရေခံ မထားမိသဖြင့်ဆောင်းလျှင် ရေစမ်း၊ နွေ
ရေခမ်းသော ကြောင့် ၀မ်းမအေး ကိုယ်မလန်း စိတ်ပါညှိုးနွမ်းရ တော့သည်ပမာ
အနေလည်း မလှ၊ အသေလည်း မလှ၊ ဒုက္ခ ခွေကြီး ကျတတ်လှချေသည်။
နေ့စာရင်း ညတွင်းချင်း စစ်ကြည့်စမ်းပါ…
လူ့ဘo သည် အနေတတ်အမြတ် ထွက်ပြီး
အနေမတော် အရှူံးပေါ် သည်ချည်းဖြစ်ရာ..
နေ့တစ်နေ့ ၏ မိမိကြံစည်သော စိတ်ထား၊
နေ့တစ်နေ့၏ မိမိပြုကျင့်သော လုပ်ကွက်များ
ညအိပ်ရာမ၀င်မီ နဖူးလက်တင် ဆင်ခြင်ကြည့်ပါလေ။
မိမိ၏ ကြံ၊ ပြော၊ လုပ် သုံးခုစလုံး တို့ တွင်ပင်လျင်
လိုချင်စိတ်ထား အားကြီးနေသော် ပြိတ္တာ သွားရန်စရံ။
မလိုမုန်းထား အားကြီးနေခဲ့သော် ငရဲသွားရန် စရံ။
မသိမိုက်မှား၊ အလိုက်စား လွန်နေသော် တိရိစ္ဆာန် သွားရန် စရံ။
အလိုမမက် အမျက်မရှိ၊ သတိလက်စွဲ၊ စိတ် နှင့်ိကိုယ် အသိမြဲနေခဲ့သော်ကား
အထက်တန်းသွား လက်မှတ်များ ကြိုတင်ရထားပြီးသူ တထစ်ချ မှတ်ပါလေ။
လောကတွင်အချစ်ရဆုံး အားအထားရဆုံးသည်သင့်အတွက် သင်သာလျှင်ဖြစ်ချေသည်။
သင့်ကိစ္စသင်မှတစ်ပါးမည်သူတစ်ဦး ၊ တစ်ယောက်ကမျှဝင်ရောက်ကူညီမပေးနိုင်
သင့်ဘ၀၏ ဆိုးကျိုး ဆိုးပြစ်များ နှင့်
သင့်အလိုမတူဘဲလျက်ကလည်းကောင်း၊ မည်သူကမျှ ဖျက်ဆီး ခွင့်မရလေသောကြောင့်တည်း။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:32 PM0comments Links to this post
၁။ ဓနဥစ္စာ ဟူသည် မိမိရရှိသော ၀င်ငွေ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံထက်မနည်းသောငွေကို မိမိနှင့် မိသားစု၏ အနာဂတ် အတွက် ချန်လှပ်သိမ်းဆည်း တက်သူထံသို့သာ ၀မ်းမြောက်ပျူငှာ စွာ ရောက် ရှိလာတက်မြဲဖြစ်သည်။
၂။ ဓနဥစ္စာဟူသည် ယင်းအား အကျိုးဖြစ်အောင်ခိုင်းစေတက်သော သူအတွက် ကျိုးနွံကျေ နပ်စွာ အားထုပ်လုပ်ကိုင်ပေးစမြဲဖြစ်၍၊ ထိုသူ၏လက်၌ သိုးအုပ်နွားအုပ်များသဖွယ်အဆတိုး ပွားများပြားလာတက်သောသဘောရှိသည်။
၃။ စနဥစ္စာဟူသည်ယင်းအား ဂရုတစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသူ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောသူတို့၏ အကြံဉာဏ် ကို ရယူလုပ်ကိုင်သူများထံ၌သာ တွယ်ကပ်ခိုလုံနေတက်ကြသည်။
၄။ဓနဥစ္စာဟူသည် မိမိလည်း မကျွမ်းကျင် ၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့လည်း အားမပေးသော အလုပ်မျိုး တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သောသူတို့ထံ မှ လျောကျပျောက်ကွယ်သွားတက်စမြဲ ဖြစ်သည်။
၅။ဓနဥစ္စာဟူသည် ယင်းမှလွန်ကဲသောအမြတ်အစွန်းမျိုးကိုမျှော်မှန်းသူများ၊ လူလိမ်လူညာတို့
၏ ဖျားရောင်းသွေးဆောင်မှုနောက် လိုက်ပါနားရောင်တက်သူများ၊ အတွေ့အကြုံနည်းပါးကာ စိတ်ကူယဉ်ယဉ်ဖြင့် မဆင်မခြင်ရင်းနှီး မှု ပြုသူများထံမှ ရှောင်ခွာထွက်ပြေးသွားတက်စမြဲဖြစ် သည်။
``ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် အဓိဋ္ဌာန်ပြတ်သားခိုင်မာပြီဆိုက ယင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်လမ်းမှန်ကိုရှာတွေ့မြဲဖြစ်သည်။``
``နောင်တကြီးစွာ မရမိစေရန်ကြိုတင်စဉ်စား မှုအနည်းငယ်ပြုပါ``
ထကြွနိုးကြားမှု ၊ အခွင့်အရေးကိုမပြတ်ရှုမြင်ပြီး အလျှင်အမြန်ရယူတက်မှုအားဖြင့်သာ ကံကြမ္မာကောင်းတွေ အဆက်မပြတ်ကြုံကြိုက်နိုင်တယ်၊ အောင်မြင်ကြီးပွား သူတစ်ဦးဖြစ် လာနိုင်တယ်။``
``ကံကြမ္မာကောင်းတွေသည် အခွင့်အရေးကိုအမိအရ ဖမ်းယူခြင်းဖြင့်သာကြုံကြိုက် ရရှိနိုင်တယ်။``
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:24 PM0comments Links to this post
ကဲအဲဒါလေးကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတော့။ win+R နှိပ်ပါ။ box ထဲမှာ regedit ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒီကနေ HKEY_CURRENT_USER==>Software==>Google==>Google Talk==>Accounts ကိုထောက်လိုက်ပါ။ ညာဘက်မှာ o ဆိုတာတွေ့ပါမယ်။ အဲဒါကို double Click နှိပ်ပါ။ Value data: အောက်မှာ gtalk သုံးခဲ့တဲ့ username တွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ်နာမည်ပါရင်ဖျက်ခဲ့ပေါ့။ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူများနာမည်တွေပါဖျက်ပေးခဲ့ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ အဲဒါပြီးရင်မပြီးသေးဘူးဗျ စောစောက Accounts ကိုကြည့်နေတယ်မလား အပေါ်ကအဆင့်ပြီးရင် အဲဒီ +Accounts ဆိုတာရှိတယ်မလား အဲဒီ + လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ဝင်ထားတဲ့ Username တွေရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့် Username ပေါ် click ထောက်လိုက်ပါ။ right click==>delete နဲ့ဖျက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့လုံခြုံ(သွားပြီလို့ထင်ပါတယ် ) သွားပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ကော်နက်ရှင် ကို ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ စက်ကနေ connection speed ပိုမြန်လာအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေး ကိုပြောပါ့မယ်။
Run ကို အရင်သွားပါ။ ပြီးတာ့ gpedit.msc လို့ ရိုက်ပြီးတော့ OK ပေး လိုက်ပါ။အဲဒီလို နှိပ်လိုက်ရင် Group Policy Box လေး ပေါ်လာရင် Administrative Templates ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ဘေးနား က Network ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် QoS Packet Scheduler ကို နှစ်ချက်ဆက်နှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ limit reservable bandwidth ကိုလည်းနှစ်ချက်ဆက်နှိပ်လိုက်ရင် Box ကလေး ကျလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို ကျ လာရင် အဲဒီ Box လေး ထဲက Not Configured ကို ဖြုတ် Enable ကို On ပေး ။ ပြီးတော့ အောက်က Bandwidth limit (%) 20 ကို0ပြောင်း ပြီးတော့ Apply => OK လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီဗျာ..။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:08 PM5comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:04 PM0comments Links to this post
IT Men's Blog မှ ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:55 PM0comments Links to this post
Microsoft Word ဖိုင်လေးတွေကို password နဲ. ပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်။
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ. screan shot ယူနည်းလေး ပြောပြမယ်။ ဘယ်နေရာမှာသုံးဖို.လဲဆိုရင် ဥပမာ အခု ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံစုံမျိုးကို အွန်လိုင်းက အခြားသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပြချင်ပါတယ်ဆိုရင် မော်နီတာကြီးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို.စရာမလိုပါဘူး။ ဒါမျိုးလေး စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ Ctrl + Print Screen Sys Rq ဆိုတဲ့ ကီးလေး နှစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ရင် အခုလက်ရှိ မော်နီတာမှာ မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကော်ပီကူးလိုက်တဲ့ ပုံစံ ပါပဲ။ အဲဒီလို ကော်ပီကူးထားတဲ့ ပုံကို Paint ထဲမှာ သွားပြီး Paste လုပ်ပေးရပါမယ်။ Paint ကိုသွားဖို.ရာ start => Run => mspaint ဆိုပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl + V ဆိုပြီး paste လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Jpg ဖိုင်နဲ.သ်ိမ်းလိုက်ပါ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:48 PM2comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:37 PM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:26 PM 1 comments Links to this post
အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ gmail ကို Internet Explorer နဲ့ ဖွင့် တဲ့ အခါ မှာ ကိုယ့် ရဲ့ မေး ထဲ မှာ မြန်မာလို စာ သား တွေ က လေး တောင့်ကွက်တွေ နဲ့ ပေါ် နေတယ် ဆိုရင် မြန်မာလို မြင်ရအောင် လုပ်တဲ့ နည်း လေး ကို ပြောပါ့မယ်။ Mozilla Firefox နဲ့ ဖွင့်ရင်တော့ ဘာမှ ပြောင်းစရာ မလိုပါဘူး....
Internet Explorer ကို ဖွင့် ပါ။ ပြိးတော့ Tools Menu ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ Internet Options ကို နှိပ်လိုက်ရင် Box လေး ကျလာ တဲ့ ခါ
အောက်နားလေး က Accessibility ကိုနှိပါ ။ ပြီးတော့ Formatting ရဲ့အောက်မှာ Box လေး သုံး ခုထဲက ဒုတိယမြောက် က
Ignore font styles specified on webpages ကို တစ်လေး ပေး လိုက်ပါ ပြီးတော့ အဲဒီအာက်နား ကပဲ User style sheet အောက်က box ကိုလည်း တစ်လေး ပေး လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီဘေး နား က Browse ကိုနှိပ်လိုက်ရင်...C: drive ထဲက Alpha Zawgyi ထဲက ie ကို နှိပ်ပြီး open လုပ်လိုက်ရင် box အဖြူလေး ထဲမှာ ဒါမျိုးလေး တွေ့ပါလိမ့်မယ် C:\_AlphaZawgyi\_ie.css
အဲဒါတွေ ပြီးရင်...OK....OK ပေး လိုက်ရင် ကိုယ့်အီးမေး ထဲ က မြန်မာလိုရေး ထားတဲ့စာတွေ အကုန်လုံးမြန်မာလိုမြင်ရပါပြီဗျာ....။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတိုင်း ဂျာနယ်ကို မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရအောင် ဖွင့်တဲ့ အခါ မှာ Mozila နဲ့ ဖွင့် ရင် အဆင်မပြေပါဘူး ။ Internet Explorer နဲ့ မှ အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် စောစောကလို gmail ထဲမှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင် လုပ်ထား လိုက်ရင်တော့ မြန်မာတိုင်း ကလည်း မြန်မာလို မပေါ် ပြန်ဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ တိုင်း ကို မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရအောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စောစော က အပေါ် မှာ ပြော ခဲ့တဲ့ တစ်စ် လေး တွေ ကို ပြန်ဖြုတ်ပေး လိုက်ရင် မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရသွား ပြန်ပါတယ်ဗျာ................။မသိသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်.....
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:15 PM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:08 PM0comments Links to this post
တစ်ခြားသူတွေ ရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးလေး တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဒီလိုဆောင်းပါးလေးတွေရေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ ခဏခဏ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်းပါးရေး မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြန်တော့လည်း ဘာအကြောင်းကိုရေးရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် စဉ်စားလို့ မရခဲ့မိပါဘူး ။အခု ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းလေးတွေရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ နေ့လည်ပိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ပြီး ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ပြောကြရင်းနဲ့ အခုခေတ်လူငယ်လေး တွေ ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောမိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်း ကို ဆောင်း ပါးလေး ရေး ရင်ကောင်း မှာ ပဲ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကူး ရမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါလေး ကိုရေးဖြစ်သွား တာပါ။ ဒီဆောင်းပါလေး ထဲမှာက ကျွန်တော် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံ လေး တွေ နဲ့ ယှဉ်တွဲ ရေး သားသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းအရာ ကတော့ အရွယ် ရောက်လာကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းပါ။ ယခု ကျွန်တော် တို့ ပြောပြောနေကြ တဲ့ Globalization ခေတ်လို့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော် တို့ နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဟာ ရွာကလေး တစ်ရွာလို ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို လူအများရဲ့ ပါးစပ်ဖျား မှာ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Globalization ခေတ်ကြီး မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ လည်း နည်း ပညာ တိုးတက် ပြောင်း လဲ မှု တွေ ကလည်း တဖြည်းဖြည်း နဲ့ တိုးတက်လာပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက် လာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ လည်း လူကြီး ၊ လူငယ် ၊ လူလတ် မရွေး ကမ္ဘာ နှင့် အညီ ရင်ဘောင်တန်း နိုင်လာ ခဲ့ ကြပါ ပြီ။ အဲဒီလို ကမ္ဘာ နှင့် အညီ ရင်ဘောင်တန်း ပြီးတော့ နည်း ပညပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွား ရေး နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း တွေ ကို လည်း အင်တာနက်မှ တဆင့် ရှာဖွေဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင်ပြီး တော့ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်နေနိုင်ကြပါပြီ။ အဲဒီလို ဖတ်ရှု လေ့လာ မှတ်သား ရန်အတွက် အင်တာနက်ကို လာရောက်အသုံးပြုကြတဲ့လူတွေထဲမှာ အခုခေတ်လူငယ် လေး တွေကတော့ မပါသလောက်ကို ရှိတဲ့ သဘောပါ။ လူငယ်လေး တွေ အမြဲတမ်း လာရောက်အသုံး ပြုတာကတော့ သူတို့ အတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာတွေကို လာ ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုတဲ့ သူတွေ ကတော့ တော်တော် လေး ကို ရှားပါး ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မှာကြုံ တွေ့  နေရတာတွေ ကတော့ ….
လူကြီး ပိုင်း တွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ သား သမီးတွေ က နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ သွား ရောက် အလုပ်လုပ်ကြ ၊ ပညာ သင်ကြ တယ် ဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ သား သမီးတွေ နဲ့ စကား ပြော ဖို့ ရန်အတွက် စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ တွေ မှာ ဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ကို လာပြီးတော့ သား တွေ ၊ ဒါမှ မဟုတ် သမီးတွေ နဲ့ စကား တွေ ကို တ၀ ကြီး ပြောဆို အသုံးပြု နေကြတာကို တွေ့  မြင်နေရပါတယ်။ အဲဒီလို အသံ ( voice ) နဲ့ ပြော ယုံတင်မက webcam လို့ ခေါ်တဲ့ ကင်မရာ တပ် ပြီးတော့ သားသမီးတွေ နဲ့ မိဘတွေ ညီကို မောင် နှမတွေ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မျက်နှာချင်း ဆိုင် ထိုင် ကြည့် ပြီး တော့ အား ရ၀မ်းသာ ပြောဆိုနေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူတို့ အတွက် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသာ မိပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ ရောက်နေတဲ့ သား သမီးတွေ ညီကို မောင်နှ မတွေ နဲ့ ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထိုင်ပြော ပြော နေကြတာ မှာ တစ်နာ ရီလောက် အားရပါး ရ ပြော မှ ကုန်ကျ စရိတ်က အများ ဆုံး ၅၀၀ လောက်ပဲ ကုန်ကျ တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပါ။ အဲဒီလို တစ်နာ ရီကို ၅၀၀ ပဲ ကုန်ကျ ခံ ပြီးတော့ အင်တာနက်ပေါ် မှာ မိမိ အတွက် အသုံး ၀င်မယ့် ပညာ တွေ ၊ ဗဟု သုတတွေ ကို ရှာ ဖွေ ဖတ်ရှု မှတ်သား မယ်ဆိုရင် လည်း အချိန် တစ်နာ ရီ နဲ့ ငွေ ၅၀၀ ရဲ့ တန်း ဖိုး ဟာ လည်း တော်တော် လေး အကျိုးကျေးဇူး ကြီးမား လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။ သို့သော် ယခု အင်တာနက်လာရောက် သုံးစွဲ နေသူ လူငယ်အများစုမှာတော့ အဲဒီလို အကျိုးကျေး ဇူး တွေ ရ ရှိဖို့ အတွက် လာရောက် အသုံး ပြုကြတဲ့ သူတွေ ကတော့ အလွန်ကို နည်း ပါး ပါတယ်။ အခု လူငယ် အများစု တွေ ဟာ အင်တာနက်ကို အချိန်တွေ အများကြီးကုန်ကျ ခံ ၊ ငွေတွေ အများ ကြီး ကုန်ကျခံ ပြီးတော့ လာရောက်အသုံး ပြုနေကြ ပါတယ်။ သူတို့တွေ အင်တာနက်လာရောက် အသုံး ပြု နေကြတဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ သူတို့ အတွက် ဘာအကျိုး ကျေးဇူး မှ မရနိုင်တဲ့ Chatting လာ ထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Chatting ထိုင်ကြတယ် ဆိုတဲ့ နေရာ မှာလည်း မိမိတို့ အတွက် အကျိုး ရှိနိုင်မယ့် နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ညီကိုမောင်နှမတွေ နဲ့ ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုကြ ပြီးတော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား က ပညာရေး အကြောင်း တွေ မေးမယ်၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းတွေ မေး မယ်၊ နိုင်ငံ ခြားမှာ ဘယ်လို လုပ်ငန်း တွေ လုပ်ရင် ၊ ဘယ်လိုကျောင်းတွေ သွား တက်ရင် အဆင်ပြေ နိုင်မယ်၊ ကောင်းနိုင်မယ် ၊ သူတပါးရဲ့ နိုင်ငံ ကို သွားတော့ မယ် ဆိုရင် မိမိဘက်က ဘယ်လိုကျွမ်း ကျင်မှု တွေ လိုအပ် မယ်၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင် မှု တွေ လိုအပ်မယ် ဆိုတာ တွေ ကို ပြောဆို မေးမြန်း ဆွေးနွေး ကြမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ အတွက် အသုံး ၀င် အကျိုးပြု နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် အဲဒီလို အသုံးဝင်သော ၊ အကျိုးကျေးဇူး များပြားသော အကြောင်း အရာ များကို လျစ်လျှူ ရှု ပြီးတော့ ၊ သူတို့ အတွက် အကျိုးမပြုနိုင်သော အသုံး မ၀င်သော စကား များ ကို သာ ပြောဆိုကြပြီးတော့ အချိန်တွေနဲ့ ငွေ တွေ အကုန်ခံ ပြီးတော့ ပြော နေကြတာ ကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကောင်လေး တွေ က Online ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တစ်ခြား တစ်နေရာ က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ စကား တွေ ကို ဖောင်ဖွဲ့ ပြီးပြော ကြမယ်။ ယောက်ျားလေး က မိန်းကလေး ကိုရည်းစားစကား ပြောမယ် ၊ တစ်ဖက်က ကောင်မလေး ကလည်း ကောင်လေး ကပြော တဲ့ ရည်းစားစကား ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပဲ လက်ခံ အဖြေပေး ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ အပြင်မှာ ဖြူလား မဲလား ဘယ်လိုလူ လဲ မသိဘဲ နဲ့ Online ပ်ါမှာ ပဲ ချစ်သူရည်းစား တွေ ဖြစ်သွား ကြပါတယ်။ ပြီးမှ ဓာတ်ပုံ လေး တွေ အပြန်အလှန် ပို့ ပေး မှုလေး တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွား ကြတယ် ဆိုတော့ ဒီကောင်လေး က ဒီကောင်မလေး တစ်ယောက်ထဲနဲ့ တင်ပဲ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွား တာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် က Online ပေါ်မျာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ကြသလို မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကလည်း Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ကြပါတယ်။ အဲဒီလို Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်မရွေူး အင်တာနက်လာရောက်အသုံးပြုတိုင်း တစ်ယောက်မရှိ တစ်ယောက်ကတော့ ရှိနေတက်ပါတယ်။အဲဒီလို ရှိနေကြတဲ့ အတွက် အင်တာနက်ကို အချိန်တွေ အများ ကြီး အကုန်ခံ ပြီးတော့ သုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီးတော့ အပြင်မှာ တစ်ကယ် တွေ့ဆုံးပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျ သွား ကြတယ်ဆိုတာ ကတော့ တော်တော် လေး ရှား ပါး လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။အခု ခေတ် လူငယ်ယောက်ျားလေး တွေထဲမှာ အင်တာနက်မှ Chatting ကို အသုံးမပြုတက်ကြသော လူငယ်လေး များ ကလည်း Game ဆိုင်တွေ မှာသွား ပြီးတော့ အချိန်နဲ့ ငွေတွေ ကို ဖြုန်းတီးနေကြတာ ကိုလည်း တွေ့ မြင်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီလို Chatting တွေ ထိုင် Game တွေ ကစား ပြီးတော့ ၊ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေမယ့် အစား အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိတဲံ ပညာရစရာ ၊ ဗဟုသုတရစရာ တွေ နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှု စေချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှု တဲ့ အခါ မှာ English စာ ကို ကောင်းကောင်း မကျွမ်း ကျင်၍ နိုင်ငံ တကာမှ တင်ထား သော မိမိတို့ အတွက် အသုံးဝင်သော Website များ ကို မဖတ်နိုင်လျှင်ပင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ တင်ထား သော ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဗဟုသုတပိုင်း ဆိုင်ရာ ၊ နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ Website များ ကို မြန်မာလို ၀င်ရောက် ဖတ်ရှု ပြီးတော့မိမိတို့ သိရှိလိုသော အကြောင်း အရာများကို ၀င်ရောက်မေးမြန်း ဆွေးနွေး နိုင်သော မြန်မာ Website အမြောက်အများ တွေ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို အသိပေး ရေး သားရင်း ခေတ်လူငယ်လေး တွေ ရဲ့ အသိပညာ ၊ အတက်ပညာ ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ အကျိုးကျေးဇူး များကို တိုးတက်များပြား လာစေရန် အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံး ချနိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် သတိပေး ရေးသား လိုက်ပါတယ်…………..
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဆောင်းပါးလေး သည် ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံးရေးသော ဆောင်းပါးဖြစ်သောကြောင့်
ဆောင်းပါး နှင့်မကိုက်ညီသော စာသားများ ပါခဲ့လျှင် ၊ လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိခဲ့လျှင် ၊ အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိခဲ့လျှင် ကူညီ ဖြည့်စည်း သည်းခံ ဖတ်ရှု ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:01 PM0comments Links to this post
မွေးနေ့ချင်းတူတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာ ကံကောင်းတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုတဲ့
အယူအဆကြောင်း နေ့ချင်းထပ်ရက်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်
ရှေးဟောင်းလောကီကျမ်းတွေရဲ့ အဆိုကို နေ့ချင်းထပ်ထားသူတွေ၊ ထပ်ချင်သူတွေ၊
`ဂဠုန်နှစ်သွယ်၊ မောင်နှင့်မယ် ပေါကြွယ်ဥစ္စာဌေး´
`ကျားနှင့်ကျားမှာ ဦးချမ်းသာ၊ နောင်လာဒုက္ခရေးတဲ့´
`ခြင်္သေ့နှစ်တန်၊ပေါင်းတုံပြန်၊ ရင်နှင့်ကွာမဝေး´ ဆိုတာကြောင့်
အင်္ဂါသားသမီးအချင်းချင်း ချစ်သက်နှံရင်ဖြင့် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရတတ်ပါတယ်
`ဟိုင်းနှင့်ကားဆင်၊ ပေါင်းဖက်လျှင် ရှည်ပင်မမြဲသေး´လို
ချစ်သူဘ၀မှာတင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါမှ
ကြာသပတေးသားသမီးချင်း အိမ်ထောင်ဖက်ထားသူတေါ ဘ၀တစ်သက်တာ
`ပူးနှင့်ပူးမှား၊ ငြင်းတတ်စွာ၊ ဒုက္ခာမောက်လို့ထွေး´ဆိုတာကြောင့်
သောကြာသားသမီးစုံတွဲတွေဟာ မသင့်မြတ်သက်ပါဘုး၊ ငြင်းတာခုံတာကိုလျော့မှ
`နဂါးနှင့်မြွေ၊ ရန်မိုးစွေ၊ နောင်လာမေတ္တာဝေး´ လို့ဆိုထားတာကြောင့်
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:02 PM0comments Links to this post
“ စေတနာ ”
ငါ့ခရီးတခုကို ဆက်နေလေရဲ့။
ကျုပ်ခရီးတခုကို ဆက်နေလေရဲ့။
မုဒိတာ နဲ့ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့
ကျုပ်ခရီးတခုကို ဆက်နေလေရဲ့ 
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:00 PM0comments Links to this post
အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက် က သစ်ခုတ်သမားရဲ့သမီးကို-------တယ်။ဒါနဲ့
ခြံထဲမှာရှိတဲ့ သစ်သီး၁၀လုံးစီ ခူးခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မကြာခင်မှာ
အဲ့ဒီမက်မန်းသီးကို မင်းရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကိုထည့်ရမယ်၊တကယ်လို့
သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ယမမင်းဆီကိုရောက်တော့ ယမမင်းက "မင်းကွာ
အရယ်ကိုမရပ်နိုင်သေးဘဲ "ယမမင်းကြီး ၊ကျတော်မျိုး
ကျနော့သူငယ်ချင်းက ဒူးရင်းသီး၁၀လုံးကို သယ်လာတာတွေ့လိုက်ရလို့ ပါ။"တဲ့
မနီ အိပ်အိုက်နေသဖြင့် မကြားသော်ကြောင့် သူမ နောက် တွင် ထိုင်နေ သော ကို
ဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍ သ တိ ပေးလိုက် သည်။
မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" ( လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက်
သူမ ပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။
ဆရာမ။ ။ တော် လိုက် တာ၊ နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်၊ တို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် က ဘယ်သူလဲ
ဆရာမမေး သည် ကို မနီမ မကြား ၊ အိပ် လို့ ကောင်း နေသည် ၊ ထို့ ကြောင့်
ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်ဖြင့် ထိုး၍ သတိ ပေး ရပြန် သည်။
မနီ။ ။"ဂျီးဆပ် ခရစ်"(လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊
ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော် ပြန်လေသည် )
ဆရာမ။ ။ မှန် ပါ တယ်၊ ဆရာမ နောက်ဆုံး တစ် ခု မေး ချင် တာ ကတော့ ၂၃
ယောက်မြောက် ကလေး မွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ဧဝ က အာ ဒမ် ကို ဘာ ပြောခဲ့ လည်း
ဒီတစ်ခါ တော့ ကို ဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီ ကို ဘော့ ပင်နှင့် နာနာ ထိုး၍
သတိပေးလိုက်သည်။မနီ အတော် နာ သွား သည်။ထို့ကြောင့် အိပ် ယာ မှ နိုး လာ
သဖြင့် ရုတ်တရတ် ထလိုက် ကာ
မနီ။ ။ နောက်တစ် ခါ ငါ့ ကို ထပ် ထိုး ရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့် ဟာ ကို
ရှင်ကျွန်မကို နမ်းရင် အဖေမမြင်စေနဲ့နော်။
ကိုယ်မင်းကို ဘယ်တုန်းကမှ မနမ်းရပါလား။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ တကယ်တည်းမှပဲ ၊ နမ်းမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။
ဆရာပေါက် ၂ ယောက် က ကျောင်း သား ကျောင်း သူ များ အား စာမေး ပွဲ စစ်နေသည်..
ဆရာပေါက်စ ၂ ယောက် က ခွက် ပုံး ကစ် ရင်း စစ် နေ ကြခြင်းဖြစ် သည်...
စစ် တဲ့ ပုံ စံ က တော့... ကြွတ်ကြွတ် အိပ်လေး တခု စီထဲ မှာ. လူ့ ကိုယ်
တွင်း မှာ ရှိတဲ့.. အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တ ခု စီထည့် ထား သည်... ပြီး
ကျောင်း သား၊ ကျောင်း သူများက မိ မိ စိတ် ကြိုက် အိပ်ကို ရွေး ချယ် ကြီး..
ထို အစိတ်အပိုင်း သည် ဘာ ဖြစ် တယ်.. ဘယ် လို အလုပ် လုပ် တယ် ဆို တာ ကို
ဖြေ ဆို ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်..
ကျောင်း သား ကျောင်း သူ တွေ ဖြေဆို သွား လိုက် ကြတာ..
ကျေားင်းသူလေး တ ယောက် အလှည့် ကြတော့....
ကျွတ်ကျွတ် အိပ်ကို စမ်း ကြည့်ပြီး...
မျက်လုံး.. ပြူး မျက်စံ ပြူး နဲ့..
"ဟင် .. ဟင်.. ဒါ....ဒါ ... ဒါ .. ၀က် အူချောင်း...၀က် အူ ချောင်း" ..
လို့ ပြော ပါတယ်..
အဲဒီမှာ ဆရာ ၂ ယောက် က...
"သမီး ဒါ စာမေး ပွဲစစ် တာ လေ...သေချာစဉ်းစား သမီး... "
"သမီး မှာ chance ရှိ တယ် စဉ်းစား လို့ ရသေးတယ် "... လို့ ပြောပါတယ်..
အဲဒီမှာ.. ကျောင်းသူ လေး က...
"မ.. မဟုတ်ဘူး.. ဒါ ၀က်အူချောင်း မှ ၀က် အူချောင်း အစစ်.." လို့.. ပြောပါတယ်.
ထို အခါ ဆရာကလည်း.
"မဟုတ်သေးဘူးလေ သမီး... ဒါလူ့ ကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တွေ.. လေ"
"ဘယ်လို လုပ် ၀က် အူချောင်း ပါမှာလည်း... သေသေ ချာချာစဉ်းစား သမီး"
"ပြီးတော့ သမီးက ဆရာဝန်လုပ်မှာလေ.. မရှက် ရဘူး..." လို့ ပြော သတဲ့..
ကျောင်း သူလေး က လည်း..
"မဟုတ်ဘူး သမီး သိ တယ် ဒါ ၀က် အူချောင်း မှ ၀က် အူချောင်း အစစ်.."
"ကဲ ဒါဆို ဖွင့် ကြည့် ကြရအောင်" ဆို ပြီး ဖွင့် ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ...
တ ကယ် ပဲ.. ၀က် အူ ချောင်း ကြီး ထွက်လာ သတဲ့.....
"ဟာ .. ခွီး တဲ့ မှ ပဲ... ငါ တို့.. ၀က် အူ ချောင်း နဲ့ မှား မြည်း
အကြီးသုံးယောက်မှာ ဆံပင်နီနီ၊ အသားလတ်လတ်၊ အရပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်သည်။
အငယ်ဆုံးမှာ ဆံပင်နက်နက်နှင့် အရပ် ပုပုဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသည်
-အချစ်ရယ် ကိုယ်မသေခင် ကိုယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောစမ်းပါ။ အငယ်ဆုံး
သားလေးက ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးဆိုတာ။
- ဘုရားအဆူဆူကို ကျိန်ပြီး ပြောရဲပါတယ်။ ရှင့်သားမှ ရှင့်သား အစစ်ပါ။
ထိုစကားကို ကြားပြီးသည်နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ပြုံးလျှက်
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:36 PM0comments Links to this post
ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက.. မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်မှာ ဖတ်ဖူးမိလို့
ကြိုက်လို့ သိမ်းထားမိတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
ညွန့်ဝင်း ( မန်း ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန )
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:00 PM 1 comments Links to this post
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့..ကြေးမုံသတင်းစာမှာပါတဲ့..
ပန်းတောင်းသန်းကြွယ် ရဲ့ ကဗျာ.လေး နဲ့ ပြန်လည် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်..
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:09 PM 1 comments Links to this post
ကျုံးသွင်း ပညာရေး သမဝါယမ လီမိတက်မှ စေတနာအပြည့်ဖြင့် ဘာသာစကား
တိုးတက်စေရန် နိုင်ငံခြားပြန် ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ် ပြုစုထားသည့်
နေ့ စဉ်သုံး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား အဘိဓာန် ကြီး ကို သင့်ဆီသို့ ဂုဏ်ယူ
ဝင့်ကြွားစွာ တင်ဆက်လိုက်လေပြီ ။ အမြန် မေးဝယ်ပါ။ အုပ်ရေ ၅၀ အထက်
မှာယူသူများ အတွက် ကံစမ်းမဲ ရှိသည် ။
ပထမဆု ပါဆားရစ် ဘွန်လေး ရထား အသွားအပြန်လက်မှတ် (T & C Apply)
ဒုတိယဆု ဟိုတယ် အယ်လ်ဂျူးနိ ၂ ညအိပ်(ကုတင်၊စောင်နှင့် မနက်စာ မပါ)
( သရဲ ကြောက်တတ်သူ အထီးကျန်အမျိုးသားများ အဖော်ခေါ်နိုင်)
တတိယဆု လက်နှိပ်စက် သုံးလုံး
စားသုံးသူများ၏ စေတနာကို ကျေးဇူးတုံ့ ပြန်သော အားဖြင့် အောက်ပါ စကားလုံးများ
ကို ရက် ၃၀ အမြည်းသဘော အခမဲ့ ပေးဖတ်လိုက်ပြီ ။
ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်း - Mercury one way, Iron one way
လက်လွတ်စပယ် - Hand Free Jasmine
ဆရာ မလုပ်နဲ -့ Don't Make the Teacher
ရေချိုးချင်တယ် - I Want to Break the Water
ဒီနေ့နေပွင့်တယ် -Today, the Sun is Open
ကျေးဇူးပြုပြီး မီးဖွင့်ပါ -Please Open the Fire
မီးပိတ်လိုက်တော့ - Close the Fire
ဗိုက်မဆာ ဘူးလား -Stomach Not Hungry?
ရေဝင်ပြေး -Water Enter Run
မနေ့ က နှာခေါင်းပိတ်တယ် - Yesterday, My Nose closed
ကိုယ်ပူနေတယ် - Body is Hot
ဖုန်း အားသွင်းလိုက် -Insert the Force to the Phone
သီချင်း နားထောင် - Song Ear Erect
ဖိနပ် စီးတော့ -Ride Your Shoe
ဈေးကြီး မိလာတယ် - Catch the Big Market
လေတက် သွားပြီ -Air Climbed Already
ဈေးတွေ တက်ကုန်ပြီ - Markets are Climbing
ခေါင်းကိုက်သေးလား - Still Bite the Head ?
မဲပေးကြ - Give Black
ဝက်သား စားသလား - Eat the Pig's Son?
မြစ်တို့ ၏ မာယာ -Trick of the Rivers
မတတ်နိုင်ဘူး ဒါဟာ ကံပဲ - I Can't Install. This is Lake
စိတ်ပူ လို့ လား - Mind is Hot ?
ချစ် နေသေးလား - Love Sun Small ?
မိုးရွာ တဲ့ နေ -့ Rain Village Day
ဖြည်းဖြည်းလုပ် -Slow Slow Make
ဓာတ်လှေကား -Electric Ladder
နှလုံးသား လျှို့ ဝှက်ခန်း - Heart Secret Room
မိန်းမ မယူနဲ -့ Don't Take Woman
ရေခဲ သေတ္တာ - Ice Box
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:08 PM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:44 PM0comments Links to this post
တစ်ခါတုန်းက ဦးထုပ်ရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့အိမ်ကထွက်ပြီး ဈေးကို
ဦးထုပ်တွေကို ခြင်းကြီးနှစ်လုံးထဲမှာထည့်ပြီး အလယ်က၀ါးလုံးနဲ့လျှိုပြီး
နေပူလို့ ဦးထုပ်တစ်လုံးကို သူဆောင်းထားတယ်…။ လမ်းတစ်ဝတ်မှာ
ခေတ္တထိုင်နားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်…။ ခြင်းတောင်းကြီးကို ပစ်ချပြီး
ညောင်ပင်ကြီးကို မှီနားလိုက်တယ်…။ ခြေပစ်လက်ပစ် အနားယူရင်း
သူအိပ်ပျော်သွားတယ်…။ အိပ်ယာက နိုးလို့ ကြည့်လိုက်တော့
သူ့ခြင်းတောင်းထဲမှာ ဦးထုပ်တွေ တစ်လုံးမှမရှိတော့ဘူး..။
သူ့ရင်ဘတ်မှာ ကပ်ထားတဲ့သူ့ဦးထုပ်ပဲကျန်တော့တယ်…။ ဦးထုပ်တွေ
မျောက်တစ်အုပ်ရဲ့ခေါင်းတွေပေါ်ရောက်ကုန်တယ်…။ အဲဒီဦးထုပ်တွေ သူပြန်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဆိုပြီး အကြံထုတ်တယ်…။ သူက အားတဲ့အချိန်မှာ
အမြဲစာဖတ်တဲ့အကျင့်ရှိတော့ ပြဿနာတစ်ခုကို ခေါင်းအေးအေးထားပြီး
စဉ်းစားဖြေရှင်းတတ်တယ်…။ နာရီဝက်လောက်စဉ်းစားပြီး သူအကြံရသွားတယ်…။
သူ့လက်ထဲက ဦးထုပ်ကို ခေါင်းပေါ်မှာ ပြန်ဆောင်းပြီး
မျောက်တွေမြင်လောက်ပြီထင်တော့မှ ဦးထုပ်ကိုချွတ်ပြီး ခေါင်းကုတ်ပြတယ်…။
မျောက်တွေကလည်း သူ့ကို အတုခိုးပြီး ဦးထုပ်ချွတ်ခေါင်းကုတ်ကြတယ်…။
ဒါနဲ့ပူလွန်းလို့ ဦးထုပ်တောင်မကိုင်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ သူက ဦးထုပ်ကို
မြေကြီးပေါ်ကို ပစ်ချလိုက်တယ်…။ မျောက်တွေကလည်း သူလုပ်တာမြင်ပြီး
သူတို့လက်ထဲက ဦးထုပ်တွေကို ပစ်ချလိုက်ကြတယ်…။ ဒီတော့မှ သူဟာ
ဒီနည်းနဲ့ မျောက်တွေလက်ထဲက ဦးထုပ်အားလုံးကို သူပြန်ရလိုက်သတဲ့…။
နောင်နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကြာတဲ့အခါ စောစောက ဦးထုပ်သည်ကြီးရဲ့ မြေးကလေးက
ဦးထုပ်တောင်းကိုချပြီး အနားယူပြန်သတဲ့….။ ခြေပစ်လက်ပစ်နားရင်း
အိပ်ရာက နိုးတော့ခြင်းထဲက ဦးထုပ်တွေမရှိတော့ဘူး…။ ညောင်ပင်ပေါ်က
မျောက်တွေခေါင်းပေါ်ရောက်နေတယ်…။ ဒီတော့ သူ့အဘိုးပြောခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရပြီး သူ့အဘိုးနည်းအတိုင်း ဦးထုပ်တွေပြန်ရအောင် ကြိုးစားတယ်…။ သူက ဦးထုပ်ကိုချွတ်ပြီး ခေါင်းကုတ်တယ်..။ မျောက်တွေကလည်း
သူ့လိုလိုက်လုပ်တယ်..။ သူက ဦးထုပ်တွေနဲ့ ယပ်ခတ်ပြပြန်တယ်…။
မျောက်တွေကလည်း သူတို့ဦးထုပ်တွေနဲ့ ယပ်ခတ်ကြပြန်တယ်…။
နောက်ဆုံးမှာ သူကလက်ထဲက ဦးထုပ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်…။ ပြီးတော့
သူ့လိုဦးထုပ်တွေ ပစ်ချမလားဆိုပြီး မျောက်တွေကို မော့ကြည့်တယ်…။
ဘယ်မျောက်မှ ဦးထုပ်ကို ပစ်မချကြတော့ဘူး…။ လက်ထဲမှာ
သူပစ်ချလိုက်တဲ့ဦးထုပ်ကို ကောက်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်တက်သွားသတဲ့…။
သစ်ပင်ပေါ် ပြေးမတက်ခင် အဲဒီမျောက်က သူ့ကိုစကားတစ်ခွန်းပြောသွားတယ်…။
´´မင်းမှာ အဘိုးရှိသလို တို့မှာလည်း အဘိုးရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့လေ´´ တဲ့…..။
အခက်အခဲတစ်ခုခု တွေ့ကြုံလို့ လုပ်နေကျ နည်းဟောင်းအတိုင်း ဖြေရှင်းဖို့
တွေးမိတဲ့အခါ ဒီပုံပြင်လေးကို အမှတ်ရပါစေ…။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:26 PM0comments Links to this post